Obere organic fatịlaịza mmepụta akara. - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Typedị Ordị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine
Akụrụngwa na-akpaghị aka
50,000 tonye fatịlaịza ịmịpụta ahịhịa
Obere obere ahihia anyi na enye gi ntuziaka na teknụzụ na teknụzụ na teknụzụ.
Maka ndị na-etinye fatịlaịza ma ọ bụ ndị ọrụ ugbo, ọ bụrụ na ị nwere obere ozi gbasara mmepụta fatịlaịza na enweghị ndị ahịa, ị nwere ike ịmalite site na obere usoro mmepụta fatịlaịza.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, steeti echepụtala ma wepụta usoro iwu amamịghe iji kwado mmepe ụlọ ọrụ fatịlaịza organic. Ka a na-achọwanye nri a na-eri n’ubi, otú ahụ ka a na-achọkwu ihe. Bawanye ngwa nke fatịlaịza organic enweghị ike belata ojiji nke fatịlaịza kemịkal, kamakwa melite ogo ihe ọkụkụ na asọmpi ahịa, ọ dịkwa nnukwu mkpa maka igbochi na ịchịkwa mmetọ ọrụ ubi na-enweghị isi na nkwalite nke ịkọ ugbo- akụkụ nhazi usoro. N'oge a, ụlọ ọrụ aquaculture aghọwo omume na-eme fatịlaịza sitere na nsị, ọ bụghị naanị chọrọ iwu nchekwa gburugburu ebe obibi, kamakwa na-achọ isi uru ọhụrụ maka mmepe na-aga n'ihu n'ọdịnihu.
Ike imepụta obere ahịhịa na-emepụta fatịlaịza dịgasị site na kilogram 500 ruo 1 ton kwa elekere.
Ngwa dị maka mmepụta fatịlaịza organic
2, ulo oru mkpofu: mkpụrụ vaịn, mmanya slag, akpu fọduru, sugar fọduru, biogas n'efu, aji fọduru, wdg
5, sludge: sludge mepere emepe, mmiri sludge, iyo sludge, wdg.
Anyị nwere ike ọ bụghị naanị ịnye usoro ntinye fatịlaịza zuru ezu, mana ịnyekwa otu akụrụngwa na usoro dịka mkpa dị.
1. Usoro mmepụta nke fatịlaịza organic na-anabata teknụzụ na-emepụta ihe dị elu, nke nwere ike mezue mmepụta nke fatịlaịza organic n'otu oge.
2. Adomụta a patented ọhụrụ pụrụ iche granulator maka organic fatịlaịza, na elu granulation ọnụego na elu urughuru ike.
3. Akụrụngwa nke fatịlaịza na-emepụta nwere ike ịbụ ihe mkpofu ugbo, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na mkpofu ụlọ nke obodo mepere emepe, na ngwa ndị a na-eme mgbanwe.
4. Anụ arụmọrụ, corrosion eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, ala ike oriri, ogologo ọrụ ndụ, adaba mmezi na ọrụ, wdg
5. Akwa arụmọrụ, uru akụ na ụba dị mma, obere ihe na regranulator.
6. Enwere ike ịhazi nhazi usoro mmepụta na mmepụta dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
1. Ugboro abụọ axis igwekota
Onye na-agwakọta okpukpu abụọ na-eji ihe ntụ ntụ eme ihe dị ka ntụ akọrọ ma kpalite mmiri iji mee ka ihe ọkụkụ ntụ ntụ ghara iru, nke mere na ihe ahụ a na-amị amị adịghị ebili ntụ na-adịghị akpọ nkụ ma ghara ịpụpụta mmiri mmiri, iji kwado njem nke mmiri ash ash ma ọ bụ nyefee ndị ọzọ erute akụrụngwa.
Iburu ihe nlereanya
2. A ọhụrụ organic fatịlaịza granulator
A na-eji granulator fatịlaịza ọhụrụ maka nsị nsị anụ ọkụkọ, nsị anụ ezi, nsị ehi, carbon ojii, ụrọ, kaolin na ihe ndị ọzọ. Ngwurugwu nke fatịlaịza fatịlaịza nwere ike iru 100%. Na urughuru size na ịdị n'otu nwere ike gbanwee dị ka ọsọ agba anọ ọsọ.
Ike （t / h）
Ike ike (kW)
Size LW - elu (mm)
3. Igwe mmiri na-eme mkpọtụ
A na-eji igwe na-agba agba agba iji kpoo ihe ndị na-eme fatịlaịza. Esịtidem eweli efere nọgidere lifts na-achụpụ ndị ịkpụzi ahụ, nke mere na ihe onwunwe bụ na zuru kọntaktị na-ekpo ọkụ ikuku iji nweta nzube nke edo ihicha.
Nkebi nha (mm)
Tụgharịa ọsọ (r / min)
4. Igwe nju oyi
Igwe ngwa nju oyi bụ nnukwu igwe nke na-eme ka ọ dị jụụ ma na-agbada ala fatịlaịza fatịlaịza mgbe emechara. Mgbe ị na-ebelata okpomọkụ nke ihe fatịlaịza kpụrụ akpụ, a na-ebelata mmiri mmiri. Ọ bụ nnukwu igwe iji mee ka ike nke fatịlaịza fatịlaịza kpụrụ.
5. Literiform warara grinder
The vetikal yinye crusher adopts a elu-ike amadium eguzogide carbide yinye na synchronous ọsọ na-egweri usoro, nke kwesịrị ekwesị n'ihi na-egweri nke fatịlaịza mmepụta ngwaọrụ na refuels.
Oke urughuru nke ndepụta (mm)
Mgbe ndinuak ihe onwunwe urughuru size (mm)
Ike igwe （kw）
Ike ikike （t / h）
6. Roller sieve
A na-eji sieve nke igwe na-eme ihe ikewapụ ihe dị iche iche na fatịlaịza fatịlaịza.
7. Igwe akụrụngwa akpaaka
Jiri igwe ihe eji akpo fatịlaịza akpaka iji kechie ihe fatịlaịza organic site na ihe dịka kilogram 2 ruo 50 kwa akpa.
Ikuku isi ikuku （m3 / h）
Ọnọdụ ikuku ikuku （MPa）
Nkwakọ ngwaahịa （kg）
Nkwakọ ngwaahịa bag / mita
Nkwakọ ngwaahịa ziri ezi